I-Retreat yaseNtabeni enoxolo
Igumbi lokulala eli-1, igumbi elikumgangatho ophantsi kwindawo ezolileyo yaseLeadville. Amaplanga amaninzi anepatio egcwele itafile, izitulo, kunye ne-BBQ. Izinto eziluncedo zangaphandle ezifumaneka entlakohlaza emva kokuba ikhephu linyibilikile. Le ndlu inazo zonke izinto eziluncedo zekhaya kuquka nommandla weofisi eyahlukileyo. Igaraji yokugcina izixhobo zakho zemidlalo. Ibhedi ilala i-1 (hayi ukutsalwa ngaphandle) +umatrasi womoya omnye. Nceda qaphela; Zonke iindwendwe kufuneka zikwazi ukunika ubungqina bogonyo lwe-covid 19 ekungeneni.
Ibekwe phakathi kweLodgepole Pines eyinqaba, le ndlu inazo zonke izinto eziluncedo zekhaya. Ukongeza kwibhedi yendlovukazi kwigumbi lokulala, kukho i-sofa epholileyo elala enye kunye ne-Aerobed enye nayo iyafumaneka. I-Apartment ebekwe kumgangatho ophantsi. I-Patio ijonge ngasentshona ngemibono emihle yokutshona kwelanga! Wamkelekile abakhweli, abazingeli, abajongi bamagqabi, abakhweli bemyuziyam, abakhweli bamafutha atyebileyo, ii-ATVers, abantu abaloba iindiza, abatyibilizi, abakhweli, okanye abaphumli nje! Igumbi elongezelelweyo kuzo zonke izixhobo zakho! Le propathi inelayisensi ngokuSetyenziswa koMhlaba eLake County, Ilayisensi elungileyo nge-12/31/22
I-Wifi – i-42 Mbps
4.96 ·Izimvo eziyi-207
4.96 · Izimvo eziyi-207
Enye yezinto endizithandayo malunga nekhaya lam kukunyuka intaba / umkhondo wesihlangu sekhephu amanyathelo nje ukusuka emnyango!
Ndihlala kumgangatho wesibini. Ukuba kukho into oyifunayo, ndikumgangatho omnye! Wamkelekile abatyibilizi, abakhweli, abahlaseli ekhephini, abalobi beentlanzi, iiplanga, abakhweli, abakhweli, ii-ATV, kunye nabaphumli!
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Leadville